Taariikhda My Butros » Waxaan ma rumaysan karo inaan Gadashada Kitaabka Tan
Last updated: Jan. 28 2020 | 6 min akhri
Toban sano ka hor, qofna kuma fikirin in sida ugu wanaagsan uguna fudud si ay ula kulmaan dadka uu noqon doono computer ah. Well, maleeyo waxa? Waa. January 2002: million kow iyo toban qof oo booqday websites shukaansiga online. July 2002: dadka siddeed iyo toban million booqday websites shukaansiga online. December 2002: shan iyo soddon milyan oo websites shukaansiga online booqday. May 2003: shan iyo afartan milyan websites shukaansiga online booqday (comScore Media Metrix, New York Times, June 30, 2003). Waa tiro ka badan 40 boqolkiiba dhammaan dadka waaweyn ee keli ah ee America. Inkastoo aragtida in tani ay tahay qof dhalinyaro ah ee dhexdhexaadka ah, kooxda da'da ugu sareysa marka la eego ballaarinta waa haweenka, shan iyo soddon in afar iyo afartan, ku xiga ragga, shan iyo soddon in afar iyo afartan. Kooxda ayaa soo socda ugu weyn? Ragga iyo dumarka, afartan iyo shan iyo konton iyo afar (Yahoo, Inc., September 2002).
The in shukaansi Internet skews ka weyn yahay ciyaaraha Internet sababo cad yihiin. Somethings soddon Single waxa ay noqon xaami, iyo in ka badan Dhaqaale xaasil, taas oo macnaheedu yahay in shaqo muhiim ah, laakiin sidaas waa jacayl, taas oo ah sababta bixinta adeegga ma aha arrin. More, dadka ku nool soddon daahay dareensan tahay cadaadiska in aan is guursano oo ay leeyihiin carruurta. Ballaarinta qaybta da'da dhexe waa in aanay ku timid badan oo lama filaan ah ama. Waxaa jira in ka badan labaatan milyan oo furay halkaas, waana aan u malayn in goobta bar ka fog tahay jiidata yar marka aad ka heli naftaada u xafladeyn la carruurtaada’ asxaabta.
Tani waxay u fiican yahay sida ay ishu?
Sida oo xoojisay sida Internet waxa uu noqday, shukaansiga online weli waa tallaabo ku dhiirato ka ab ka ab dadka ay muctaad u yihiin siyaabaha dheeraad ah oo ku dhaqanka ee ku shirsan. Laakiin xaqiiqda ah in siyaabo kale shirka waxaa loo aasaasay in ka badan uusan iyaga ka muuqo aanna ka xoogbadan,. Ka fikir waxa ku saabsan. Xagee dadka sida caadiga ah la kulmi saaxiibadiisa ay?
Baararka? Haa, waxaad xaqiiqdii leeyihiin fursad wanaagsan oo ah shir “mid ka mid ah” haddii aad ku sakhraamin. Qof kastaana wuu ogyahay in dadka tayada ugu saraysa joognaa si joogto ah ugu baararka. (Ma aha in ay ka fogaadaan casinos iyo guryaha ee qarankeena wax weyn qaadan.)
Xisbiyada? Sida baararka mooyee mashquulo xor ah oo maquufin basasha. Laakiin haddii aad tahay qof aad u soo jiidasho, bold, ama la simi, qaadaaya qof ilaa dhowr saacadood ee xisbiga ah ma aha had iyo jeer waxa ugu fudud ee lagu sameeyo. In ay awoodaan in weydii, “Sidee ayaad ku ogaan martida loo yahay?” Xisbiyada siinayaa gees yar ka badan baararka.
Work? Fact: isagoo guri u dhacaya la coworker a Fasaadiyaan doonaa mid ka mid ah Raaxo yar aad laga yaabaa in markii hore lahaa goobta shaqada. In ra'yiururin in aan been abuurto oo kaliya in madaxayga, 86 boqolkiiba dadka waxa ay halkii bilaa shaqo ahaan lahaayeen shaqo sidii hore ah isla xafiiska ka badan. Taasi waa qaar ka mid ah caddayn ay ku qancaan ka dhanka shukaansiga interoffice xaq jiraan.
Church? Waxaad u malaynayso inaad u baahan tahay inaad siman ee baar? Isku day inaad helayso lambar qof ee Golaha Ilaah, gaar ahaan haddii aroor iyo Dad fadhiya midig xiga in aad loogu talo galay xaaskaaga mustaqbalka. Is weydii: waxa ku sameeyaa Ciise lahayd? Waxaan kula murmin xaalkooda uu ku dhuftay lahaa internetka iyo sidoo.
Guurka qaban qaabiyey? Waxoogaa A qadiimo, laga yaabee, laakiin ay ka saareen element ee doorashada hubaal ka dhigaysa shukaansi badan oo dhan fudud. Oo lagu daray Big. Aan hayn sida a “tixgeliyaan.”
Taariikhaha Blind? Waxaan soo qaadan doonaa baxay khasaaray aniga ii gaar ah, mahadsanid.
Okay, Maxaad aan halkaan ku heysano? Guurka qaban qaabiyey ama internetka? Show A degdeg ah oo gacmaha shaaca ka qaaday in inta badan ee America ayaa weli isku halleeyey, gaar raci shukaansi cilladaysan ka badan waalidkood’ dareenkaaga shukaansi cilladaysan. Sidaa darteed, guurka qalqaaliyay baxay iyo guul shukaansi Internet.
Amazing, geedi socodka dimuqraadiyada ah ee iska fadhinnaa.
All kaftanka dhinac iska, shukaansiga online fog tahay fududaado oo ka jabnaado ka badan dhan oo ka mid ah doorashooyinka sare. Hab fudud oo raqiis ma aha laba eray oo aad rabto in aad isticmaasho si aad adigu isku tilmaami, laakiin ay tahay kaamil ah ujeedooyin noo shukaansiga online. Waayo, isla konton doolar waxaa laga yaabaa inaad turumbada afuuftaan la cabbo at bar maxali ah habeenkii Sabtida ah halka u dhowaanin gabi ahaanba qofna, aad qabto yaabaa lix bilood ah Iimayl limitless on AmericanSingles.com. More, hab fudud yahay (Qasab ma aha in aad leedahay line a qaadi suave), diidmada waa fududahay (wax ku jir cabitaanka-in-ka-fool ah oo keliya uma shaqeeyo in ka badan kombiyuutarka), iyo heerka guusha uu ka sareeyo (sababtoo ah qof walba oo ku saabsan goobahan waa hal, sida ka soo horjeeda Dhaaquut bar badan oo kaliya baxay in ay leeyihiin xiiso leh saaxiibadood).
Si kastaba ha ahaatee, Faa'iidada ugu weyn ee shukaansi Internet waa this: aad ka hesho in la ogaado xaaskaaga / saaxiib / nadaaya aan mustaqbalka u yeedhataana ka hor, waxaad isaga hor / iyada. Tani waa muhiim ah, waana mid istaahila in baaritaano shidaal oo dheeraad.
Dhamaanteen waan ognahay muhiimada ay leedahay soo jiidashada jirka in xiriir. Waxaan lahaa saddexdiisii ​​saaxiib, kuwaas oo halis ah xiriirka live-in ka dhacay ee sabab la'aanta ah ee xiisaha galmada labada dhinac. Sidaas aniga ma beenin in qaraxa danbeba in Waxaan ugu baaqaynaa dhamaan “chemistry” waa qayb muhiim ah in xiriir ka gaysashada. Waxaan leeyahay, Si kastaba ha ahaatee, in sida aad la kulanto qof u yeerin karaan koorsada aad wada hadalka bilowga ah oo dhan, aad isdhexgalka mustaqbalka, oo sidaas daraaddeed, inta kale ee noloshaada.
Text: “Waxaa, Waxaan ahay Fred.” Hignaseyno: “Waxaad Anigoo qaawan baan ka arki kartaa?”
Waxaan qabaa aragtida ku saabsan sababta ay sidaas u cajiib adag si ay ula kulmaan dadka baararka iyo dhinacyada. Waxaa ka shaqeeya wax sidan oo kale:
Waxaa habeenkii Sabtida. Boys’ Habeen ka baxay. Gabdhaha’ Habeen ka baxay. Qof kastaa wuxuu purpose- a dual(a) joognaa asxaabta iyo (b) kulmaan qof ee galmada ka soo horjeeda. Haddii aad tahay nin, inta badan waqtiga aad tagto guriga faro-maran. Waxaa laga yaabaa in aad la hadashay qof, laga yaabee in aan, laakiin malaha inta badan aad habeenkii lagu kharash gareeyay in aad la hadasho saaxiibada aad ku saabsan sida kulul iyo Reebnaan yaa dumarkii oo dhammu ka eegay, oo sida aan caadi aheyn waxa ay noqon lahaa haddii uu geesinimada u dhawaadaan hal mid oo ka mid ah. Haddii aad tahay qof dumar ah, aad u badan tahay ayaa xalay waxa soo taxnaa durugsan ee ka mid ah lixdii guys aduunka ee slimiest, kuwaas oo si difaaca ku diiday in, ka dib markii mid idinka mid ka, ay si dhakhso ah u kacay shan feet hoos birta ku dhuftay in ay qof dumar ah ugu soo jiidashada badan ee soo socota ay ka heli karto. Haaa, waa suuqa hilib ah halkaas, Weli dad yar ay qabanayaan shir tayada wax. Halkan halkaas oo aan aragti bilaaban in.
Dhaqan, waa nin Saaran Dhawaanina qof dumar ah oo ka dhacay baar ama xisbi. Wuxuu taas u samayn kartaa dhowr siyaabood. Khadadka qaad-up caadi ahaan waa bilow wanaagsan. Mid ka mid ah mar walba isku dayi kartaa guuleysatay surefire:
“Waan ogahay caanaha la Timaadda Wanaag jirka ah, laakiin ilmaha, inta ay le'eg ayaad cabtay?”
“Ma aaminsan tahay in jacayl la arko marka hore, ama waa in aan mar kale ku soconnaa?”
“Miyaan heli karaa sawirka idinka mid ah, sidaa darteed waxaan ku tusi kartaa Santa waxa aan doonayo for Christmas? “
“Kabaha Nice. Doonayaa inaan galmo?”
Laakiin xataa haddii aad tahay sidii soo jiidasho iyo daacad ah sida khadadka kor ku tilmaamaya lahaa, sida nin, aad bilaabo mawqif adag. Xitaa haddii aad sheegto wax fudud oo toos ah sida, “Waxaa, Waxaan ahay Evan,” kaliya ay u dhowaanin naag, aad samaynayso mid wax aad u cad: Waxaad doonaysaa in aad hesho in iyada surwaal. Waxay u ogyahay. Waxaad ku ogaan. Sida aad u goglay No arrinta, Dhab ahaantii tani waa in aad waxa u soo gudbiyey iyada inaad ku bilowdo.
Haddaba haddii aad rabtid in aad saadaalin xataa wax dheeraad ah, xitaa aad dhihi kara in labaad waxaad u tagaysaan naag, iyada karta mid aad si fiican u la fiirsanayso in aad u socotid inaad aabbe u noqon carruurta iyada. Ma aan qoslin. Waa run. Iyo in cadaadis badan ee nin. Gaar ahaan haddii aad aaminsan tahay factoid u ifaaya in qof dumar ah waxay u dhigantaa maskaxdeeda shan ilbiriqsi gudahood haddii ay doonayo in uu seexan kula. In runta, nin ma laha waxaad dhahdaa Amarka. Laakiin in uusan u joojin isku dayaya. Sidaas darteed, kumanaan sheekaysiga raaxo qaadan meel maalin kasta ee la cabo shirkadaha ku yaal daafaha America, badan si chagrin ee dhammaan dhinacyada ku lug leh, marka laga reebo bartenders ah, kuwaas oo si farxad leh u rujisay murug qof walba ee khamriga top-shelf qaali.
Dabcan, midkoodna ma nin / qof dumar / galmo / hignaseyno guurka laga wada doodi karin. Intii aan lagu khasbo in ay cayaaraan qoob ka ciyaarka iyo weheshiga this cajiib ah in uu qaaday meel kumanaan sano, ama ugu yaraan tan dhalashada ee goobta bar ah. Sidee khiyaano aad noqon kartaa in samaynta hadal yar oo qariib ah wadarta? Dadka intooda ugu badan, jawaabtu tahay “ma mid aad.”
Taas oo ah sababta kor u qaadaaya qof ee baar ama xisbiga aan ku salaysan wax ka badan aragti ah horeysay. Taasaana u sabab shukaansi dunida dhabta ah iskuugu iyo xeerarka shukaansiga online. Taasaana u sabab aad kitaabkan in la bilaabo akhriska. Laakiin, waad ogayd inay.
Farqiga u “soo qaado” la gaabis ah, Habka badan mid shakhsi ah shukaansiga online iyo aad ugu dhammaan doono sidii saaxiib Teresa aan (a diinta cusub shukaansi Internet), oo dhawaan igu yidhi telefoonka: “In la soo dhaafay oo aan ku gaari lahaa xiriir galay oo markaas aad u hesho in la ogaado qofka aan shukaansi. Hadda waxaan u helaysaa in aad ogaado qofka hor inta aanan bilaabin iyaga shukaansi.” Trite, laakiin run. Intee jeer ayaa aad kulmay qof ee baar, ka heleen lambarka telefoonka iyo dhunkasho, oo markaas bilaabay barashada ku saabsan kasta oo kale oo lagu jiro la raadiyo maalinta koowaad? Imisa jeer ayaad u Dhumban xiriir galay sababtoo ah qof ahaa soo jiidasho aan xitaa ka fiirsanayso in ay laba idinka mid ahaayeen fasiraad? Si aad u dheeraad ah u abbaaro dhigay, oo naga mid ah oo aan galmo la yeelatay qof aan ogeynba midabka ah ee indhihiisa? Ama in ay yihiin walaalo? Ama koray carruurta? Ama qof sidee buu dheer uu ka maqnaa ku siidayn?
Ha ka xishoonayaan ma noqon. Waxaa loo yaqaan dabeecadda aadanaha. Laakiin kaliya sababtoo ah waa caadi in ay doonayaan in ay ku boodaan ceyriyo shisheeye cute, Sababaha macquulka ah ee dhigaya in dhaqamada caynkaa ah mar walba ma dhisaan aasaaska ugu adag ee ah xidhiidhka mudada dheer. Taas waxa aynu ku jirno dhan ka dib, ma aha? Well, ma aha?
Fine, ka jawaabi weydo in.